लायन्सको दोस्रो क्याबिनेट बैठकको तयारी पुरा – Gaule Media ::
Home/समाचार/लायन्सको दोस्रो क्याबिनेट बैठकको तयारी पुरा
Gaule media १२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:४१
पोखरा, मंसिर १२ गते । लायन्स क्लब्स इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक ३२५ बि १ नेपालको दोस्रो क्याबिनेट बैठकको तयारी पूूरा भएको छ । मंसिर १३ गते शनिबार हुुने बैठकको तयारी पूूरा भएको होस्ट क्लब लायन्स क्लब अफ पोखरा पिस चौतारीका पुर्व अध्यक्ष तथा को चिफ एडभाइजर बिनोद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुु भयो ।
कोरोना महामारीका कारण प्रविधिको प्रयोग गरी जुम प्रविधि मार्फत बैठक गरिने होस्ट क्लबका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दाहालले बताउनुु भयो ।
करिव १८ सय ५० भन्दा धेरै लायन्स सदस्यले दर्ता गरिसकेको र कार्यक्रमका लागि डिजिटल प्रविधिको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको कार्यक्रम संयोजक डा. बिष्णुप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिनुु भयो ।
लायन्स इन्टरनेशनलका थर्ड भाइस प्रेसिडेन्ट डा. पेट्टी हिलको प्रमुख आतिथ्यता, अन्तराष्ट्रिय पूूर्व निर्देशक सञ्जय खेतानको बिशेष आतिथ्यता तथा नेपाली लायन्स लिडरहरुको उपस्थितीमा उक्त क्याविनेठ बैठक हुने क्याबिनेट सेक्रेटरी सुर्यकुमार के.सीले जानकारी दिनु भयो ।